IOS का लागि मेल इनबक्स कन्फिगर गर्नुहोस् आईफोन समाचार
आईओएस Mail मेलले यससँग स्पष्ट सौंदर्य परिवर्तन ल्याउँदछ, तर यसले नयाँ विकल्पहरू पनि समाहित गर्दछ, जस्तै ईनबक्सलाई हाम्रो मनपर्ने कन्फिगर गर्न सक्ने क्षमता। सक्छ फोल्डरहरू मेटाउनुहोस्, नयाँ थप्नुहोस्, अपठित सन्देशहरूको साथ एउटा फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्... हामी चरण-चरणमा वर्णन गर्छौं कि कसरी ईनबक्सलाई हाम्रो मनपर्दोमा छोड्ने, सबै चीजहरूमा सीधा पहुँच गर्न जुन हामीलाई वास्तवमै चासो दिन्छ र के छैन बाहिर छोड्दछ।
हामीले पहुँच गर्नै पर्दछ ईमेल अनुप्रयोग मूल आईओएस मा, मुख्य विन्डो मा "सम्पादन" बटन मा क्लिक गर्नुहोस् पहुँच कन्फिगरेसन विकल्पहरू इनबक्सबाट।
हामी देख्नेछौं कि थप फोल्डरहरू देखा पर्नेछन्। केही सक्रिय छन्, बाँयामा निलो चिन्हले चिनो लगाइएको, र अन्य निस्क्रिय पारिएका छन्, चिन्ह बिना। हामी यसलाई हाम्रो मनपर्नेमा परिमार्जन गर्न सक्दछौं। उदाहरण को लागी, मलाई यो ट्रे को लागी धेरै उपयोगी छ सिधै मलाई अपठित सन्देशहरू देखाउनुहोस्। यदि हामी सूचीमा नभएको हाम्रो खाताको कुनै पनि अन्य फोल्डरहरू थप्न चाहन्छौं भने, mail मेलबक्स थप्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी त्यसपछि हामीले चाहेको खाता चयन गर्दछौं, र फोल्डरले छनौट गर्दछ जुन हामीलाई रुचि छ। यो बायाँको चिन्हले चिन्ह लगाईनेछ, र हामी जति चाहान्छौं छनौट गर्न सक्दछौं।
एक पटक चयन भएपछि, हामी स्वीकार गर्दछौं र हामी फोल्डर विन्डोमा फर्कने छौं। हामी भर्खरै थपिएको फोल्डर सार्न सक्छौं हामी चाहेको स्थितिमा दायाँ तिर तेर्सो रेखाहरूमा थिच्ने र स्लाइडि। गर्न सक्छौं। हामी बाँकी फोल्डरहरू पनि सार्न सक्छौं।
जब हामीसँग इनबक्सलाई हाम्रो मनपर्ने कन्फिगर गरिएको छ, ठीक मा क्लिक गर्नुहोस् र हामी मुख्य इनबक्समा फर्कनेछौं।
हामीसँग पहिले नै हाम्रो निजीकृत इनबक्स छ, ती फोल्डरहरूको सर्टकटको साथ जुन हामी अधिक प्रयोग गर्छौं। यो कुनै पनि खातासँग गर्न सकिन्छ जुन हामीले मेलमा थपेका छौं। के तपाईंलाई मेलबाट कुनै थप सुझावहरू थाहा छ? के तपाइँ तपाइँको कुनै श doubts्का को समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्ने कोशिश गर्नेछौं।
थप जानकारी - मेल थकित हुनुहुन्छ? आईप्याडमा मेल प्रबन्ध गर्न विकल्प: Incredimail, आउटलुक र Evomail को लागि मेल।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» IOS का लागि मेल इनबक्स सेट अप गर्नुहोस्
मलाई थाहा छैन तर हरेक पटक जब म आईफोनमा अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्दछ यसले मलाई मेरो आईकक्लोड खाता देखाउँदछ, मलाई मेलबक्स दृश्य देखाउनुको सट्टा, जुन यो थालनीमा मलाई देखायो। मलाई थाहा छैन मैले केहि दिनको लागि यस्तो गरिन।
म तपाईलाई मेल आईकनमा क्लिक गर्न चाहन्छु, पहिलो चीज जुन मलाई देखा पर्दछ त्यो मेरो सबै मेलबक्सहरूको दृश्य हो।
अनुप्रयोग मैले संदर्भित गरिरहेको छु मेल हो। माफ गर्नुहोस्।
मेरो आईक्लोउड खाताबाट मेरो मतलब आईक्लाउड ईमेल खाता हो, जुन म प्रायः प्रयोग गर्दैन। र यो एक हो कि जब म मेरो आईफोनमा मेल अनुप्रयोग चलाउँछु।
रमन एनरिक सिल्वा आयला भन्यो
तपाईको आईफोनबाट सुप्रभात, मैले केहि मेल चालहरू गरे, सबैको ईनबक्सबाट इनबक्स सम्म, इनबक्स खोल्दा त्यहाँ कुनै मेल छैन।
रामन एनरिक सिल्वा आयलालाई जवाफ दिनुहोस्